Polymer Processing Techniques
08-10-2008 04:36 PM #1
The first three polymer processing techniques are more popular than others.
· Extrusion isacontinuous process capable of very large production volumes
· Most thermoplastics, and some thermosets can be extruded
The injection molding equipment or machine has three basic components (functional units) (1) injection units (plasticator), (2) mold, and (3) clamping unit.
The function of plasticator is to prepare the proper plastic melt and through the injection unit transfers the melt into the next component that is mold. The clamping system closes and opens the mold. The machine perform certain essential functions –
1.	Plasticizing: heating and melting of the plastic in the plasticator.
2.	Injection: injecting from the plasticator under pressureacontrolled volume shot of melt intoaclosed mold, with solidification of plastics beginning on the mold’s cavity wall.
•	High production rates
•	Design flexibility
•	Repeatability within tolerances
•	Can processawide range of materials
•	Relatively low labor
•	Little to no finishing of parts
•	Minimum scrap losses
•	High initial equipment investment
•	High startup and running costs possible
•	Part must be designed for effective molding
•	Accurate cost prediction for molding job is difficult
the polymer has to heated twice, once to form the sheet (extrusion) and again during vacuum forming
the range of shapes available is limited[/li]
The largest application is for food packaging such as toiletries, pharmaceuticals, electronics.
Baths and shower trays, ski-boxes, refrigerator liners, parts of vehicle cabs, sandwich boxes, exterior shop signs
The Following2Users Say Thank You to eikhinewai For This Useful Post:
pyaephyo3110, William Paul
09-01-2008 09:30 AM #2
ပြန်စာ -> Polymer Processing Techniques
အခုတော့ စာဖတ်လိုက် ဦးမယ်
10-27-2008 04:01 PM #3
ဆက်ရေးပါအုံး frodo ရ
မအားဘူးထင်တယ်... အားရင်ဆက်ရေးနော် ...
02-25-2014 12:55 AM #4
ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါတွင် polyethylene ကို plastic production နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ polyehtylene ကို High,low, medium pressure သုံးမျိုးတွင် polymerization(ပိုလီမာပြုလုပ်ခြင်း) လုပ်နိူင်သည်။ polyethylene ပြုလုပ်ရာတွင် အခြေခံအားဖြင့် ethylene ကို method အမျိုးမျိုးဖြင့် structure and properties များပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိူင်သည်။ Method တစ်ခု၏အောက်တွင်ပင် temperature, pressure စသည့် condition များပေါ်တွင် မူတည်၍ မူကွဲ products များထွက်နိူင်သေးသည်။ အဓိက အားဖြင့် structure and properties များ ကွဲပြားနိူင်သည်။
High pressure အောက်တွင် ethylene ကို polymerization ပြုလုပ်၍ ရရှိသော polyethylene ကို Low Density Polyethylene LDPE ဟုခေါ်သည်။
The Following5Users Say Thank You to nayzaw3053 For This Useful Post:
konge, phoelapyae, pyaephyo3110, William Paul, yeakharr
02-25-2014 07:33 AM #5
ကျေးဇူးပါဗျာ.. အတတ်ပညာ အတွေ့အကြုံ ပညာရပ် တွေမျှဝေတဲ့အတွက်။
The Following2Users Say Thank You to konge For This Useful Post:
phoelapyae, William Paul
03-18-2014 12:03 AM #6
ပိုလီမာအမျိုးအစားများထဲမှ ဟိုင်ဒရိုဂျင်နှင့် ကာဘွန်နှစ်မျိုးထဲသာပေါင်းစပ်ထားသောပိုလီမာများကို polyolefin ဟုခေါ်သည်။
ပိုလီအီသိုင်လင်းမှာ လူသိများသော ပိုလီမာဖြစ်သည်။ ၄င်း၏ ကမ်မစ်ကယ် ဖော်မျူလာမှာ (CH2-CH2)n ဖြစ်သည်။ PE ပိုလီအီသိုင်လင်းသည် non polar material
ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်းသည် common solvent and hardly swells များတွင် မပျော်ဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပိုလီအီသိုင်လင်းမှ ထုတ်လုပ်သော ပိုက်များအချင်းအချင်းဆက်
ပိုလီအီသိုင်လင်း များထဲတွင် ပိုလီအီသိုင်လင်းအမှတ် ၁၀၀ သည် ပိုက်များထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၄င်းကို PE 100
ဟု လွယ်ကူစွာ ခေါ်လေ့ရှိသည်။ မော်ဒန် PE 100 များသည် bimodal မော်လီကျူးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ကများသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်း ပိုလီမာထဲတွင်
၁၀၀ သည် မျက်နှာပြင်ထိခိုက်မှုတွင် အညှာလွယ်သော အမျိုးအစားမဟုတ်ပေ။
Bimodal PE များသည် non polar သဘာဝများဖြစ်သည်။ non polar ဆိုသည်မှာ မော်လီကျူးအတွင်း အက်တမ်များအချင်းအချင်း တူညီသော အီလက်ထရွန်ကို
အောက်ဆီဂျင် တို့ကြောင့်အနည်းငယ်ထိခိုက်မှုများ အရည်အသွေးကျဆင်းမှုများဖြစ်နိူင်သည်။ ၄င်းပြသနာကို carbon black ကို ပိုလီမာအတွင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြင့် UV
exposure ကို ခံနိူင်ရည်ရှိစေသည်။
The Following3Users Say Thank You to nayzaw3053 For This Useful Post:
phoelapyae, William Paul, yeakharr
01-23-2015 09:20 AM #7
PVC pipe production လေးအကြောင်းသိသူများေ၇းပေးကြပါ
Quick Navigation ဓာတုအင်ဂျင်နီယာပညာ Top
All times are GMT +6.5. The time now is 10:21 PM.